Iimpawu eziwusizo, amakhowe
Ngubani phakathi kwethu ongazange azame izitya kwi-veshenki okanye ubuncinci abazange abone ekuthengiseni amakhowe ngeekati ezijikeleziweyo, njengegobolondo? Ngeemeko zendalo, ama-oyster amakhowa akhula emithini, kodwa azaliswe kakuhle kwiimeko ezidalwe ngokufanelekileyo. Ngexesha elifanayo, ukubambelela kumgaqo okhulayo kunye neemfuno ze-substrate ziqinisekisa ukhuseleko lwempilo yethu. Kwaye nayiphi na i-hostess, i-oyster mushrooms iyinwaba evela ekuphekeni, xa ungafanele uhlanjululwe ngokuhlamba ama-mushroom entlabathi, ukucwilisa ixesha elide okanye ukuwapheka, ngokukhawuleza ucoce umhluzi. Emva kwakho konke, kunye nama-mushroom yonke into ilula kakhulu: hlamba, usike isiseko semilenze uze upheke! Ngoko, umxholo wendaba yethu yanamhlanje "Impahla efanelekileyo, amakhowe ase-veshanka".
Ukuba ufuna ukuthabatha inxaxheba kwimincintiswano ekuphekeni ngokukhawuleza kwezitya zangaphambili, ii-mushroom ze-oyster ziya kunceda kule nto! Imizuzu eyi-15-20 - kunye nekhosi yokuqala okanye yesibini ikulungele. Kwaye kuyonwaba ukukhuphisana kwiindidi ezahlukeneyo ezivela kwi-cherries: sipheka, sipheka, sisomile, size senze i-marinate, silungiselele ngezinye iindlela. Kuyathakazelisa ukuba kwi-oster mosster effect effect ilahlekelwa ngaphezu kwe-15%, ngelixa ezinye iifungi - ngamanye amaxesha ngaphezulu. Naliphi na indlela yokupheka ama-mushroom oyster kuya kusinceda kuphela ngeempawu ezintle kakhulu, kodwa kunye nezixhobo ezahlukeneyo zokuphulukisa. Ziziphi iimpawu ezixhamlayo kwaye zithembele kuzo?
Isiqulatho seekhalori zezihlathi si-40 kcal ngekhulu legramu, kwaye ukuziva indlala kuyaneliseka ngokupheleleyo. Kukho na ukutya kukho indawo yokutya kwiimveliso ezinjalo! Abantu abanolwazi bayathetha ngokuqinisekileyo ngama-oyster amakhowe njengama-mushroom inyama. Emva koko, le mushroom iqukethe i-amino acid ezifana ne-lysine, i-threonine, i-valine kunye ne-phenylalanine. Ezi zi-amino acids azihlanganisi emzimbeni wethu kwaye zivela kwiqela lezinto ezingenakulungiswa, kwaye ngoko kufuneka zivela ngaphandle. Kodwa akukho konke. Izinto zeprotheni azihlali zihlala zixakeke kakuhle, nokuba zimelele ngokubonakalayo kwimveliso. Kodwa nge-oyster mushrooms, imeko ihluke - i-protein ye fungal isondela kwi-100%.
Abo sele bekulungele izitya kwi-cherry-wool ngokuqinisekileyo baqaphele ukuba umthamo we-mushroom mass uyancipha kakhulu encinci ngexesha lonyango lwezoshisa, umzekelo, ngexesha lokucima. Isizathu sise-polysaccharides, eninzi enkulu kumakhowe ama-oyster kunamanye amakhowe. Kufunyenwe izakhiwo ze-polineaccharides, ezigcinwe emva kokupheka, kwaye zikwaziwa kwiindawo
kunye neentambo. Ukunciphisa umngcipheko womhlaza ekubandakanyeni i-veshenok ekudleni kuqinisekiswa ngabahloli beJapan.
Amakhowe e-Oyster ayanceda abo banenkxalabo malunga nemeko yempahla kwaye bafuna ukulawula izinga le-cholesterol. Ucwaningo lwezesayensi kwizilwanyana luye lwabonisa ukuba ukongezwa kwincinci (2-4%) yeengqungquthela ekudleni apho i-cholesterol ibonakala isenza ngokunyanisekileyo ekuhlanganyeleni kwayo kungekuphela kwigazi kodwa nasesibindi. Ekunciphiseni izinga le-cholesterol, iifayili zokutya ezizityebi kuma-mushroom e-oyster zinceda. Ama-mushroom e-Veshanka anceda ukususa i-cholesterol kunye ne-bile acids, esebenza njengezihlambululi, ngaphandle kokuphazamisa ukuxhamla kwabo emathunjini. Ukongeza, kwi-mushroom ye-oyster, into efunyenwe kwiqela leemimiselo ezivimbela ukuhlanganiswa kwe-cholesterol, i-lovastatin.
Kodwa kungekhona kuphela iipropati ezixhamlayo, kodwa iivithamini zikhoyo kula ma-mushroom. Ukususela kwiivithamini zeqela lezinto ezinqabileyo zamanzi, zikhona iivithamini zeqela B kunye nezinto eziphilayo eziba yi-ascorbic acid. Kwakhona kufumaneka iivithamini ze-vitamins ergocalzoferol kunye ne-tocopherol.
Kodwa into engekho kwiimayinali zamakhowe zizinto ezinobuthi, umzekelo, i-alkaloids kunye ne-mycotoxins. Kwakhona, i-nitrate kunye ne-nitrites ayitholakali, ziguqulwa zibe yiprotheni yi-mycelium, ekwahlula ngokupheleleyo i-enzyme kwiinambuzane ezibulala izibulala-zinambuzane kunye ne-herbicide.
Kwindlela yokwakhiwa kwezinto ezinamaminerali, i-cherry, insimbi, i-potassium, i-phosphorus, i-zinc, i-calcium, iodode. Abantu abanesifo sikashukela bangadla ngokukhuselekileyo le mushroom ekudleni kwabo. Ayikho i-glucose, kodwa i-mannitol ikhoyo, ayiyikatshitshiyo kwi-diabetes. Ukongezelela, iifungi zihlala ixesha elide kwisisu kwaye zincede ukunciphisa izinga lokunciphisa kwizinga le-glucose yegazi emva kokutya, kwaye oko kukuchaphazela ukukhutshwa kwe-hormone insulin. Ezi zakhiwo ezizuzisayo ze-veshenok zibaluleke ngokukhethekileyo kubantu abanesifo sikashukela kunye nalabo abafuna ukunciphisa umzimba, njengoko isondlo sinciphisa.
Iimpawu ezintle kakhulu ezibonakalayo zithandwa ngabantu abaninzi abathandayo izitya ze-mushroom. Bayiqaphela ukuba i-mushroom ukunambitheka kunye nephunga le-veshenok libhekiselele ngakumbi kuneloyi-mushrooms. Ziziphi izinto ezingabonakali zokupheka izitya ezenziwe nge veshenok! Kanti, kukho imigaqo eqhelekileyo yokusetyenziswa kwezi fungulu:
Ukunyuka kwefuthe kuqhutywa ngomlilo omncinci. Ngoko zonke iinguqu zokunambitha kunye ne-flavour of mushrooms ziya kubonakala.
Iinqayi nemilenze ye-vesen zifuna amaxesha okupheka ahlukeneyo. Iinqayi emva kokusika izicatshulwa ezifanayo zifuna ukupheka okungaphantsi kwemizuzu engama-20, ngaphandle koko bafumana "i-rubber". Imilenze ingapheka imizuzu engama-40, de ibe ilula.
Ukuhlambulula kunye nokukhethwa kungcono ukusebenzisa iihappy.
Yima iinqwelo kunye nemilenze ye-vesicles kufuneka ibe ngokwahlukileyo. Ukulungiselela ipowuni yamakhowe, imilenze isetyenziswa.
Ngoku uyazi yonke into malunga nezixhobo ezixhamlayo ze-mushroom ezixhomekile kwaye uza kuphepha ngokuzivocavoca! Uncedo kuwe kunye nokutya okumnandi!
Itiyi elihlaza lingabangela isifo nesifo sesibindi
Indlela yokufundisa umntwana ukuba athethe kwangaphambili?
Omelette kunye neetatayi
Ukutya okunomsoco waseJapane nokupheka
Inyanga yokuqala yokukhulelwa: ukuphuhliswa kwesibindi iintsuku kunye neentsuku kwisithombe kunye nevidiyo
Into enomdla kakhulu ngeeMidlalo zeMidlalo zeMTV 2013